Raw 6-Paradol Powder (27113-22-0) Soosaarayaal - Phcoker
Waxay soo saartaa Cannabidiol (CBD) budada iyo saliida Jumlada!
POWDER HCL RAYN SYNEPHRINE
BUURTA LORCASERIN RAW
Paradol, oo sidoo kale loo yaqaan Raw 6-Paradol, waa dhadhanka firfircoon ee ka mid ah abuurka basbaaska Guinea (Aframomum melegueta …… ..
Capacity: 1560kg / bishii
Qalabka Root 6-Paradol (27113-22-0)
Xashiishka 6-Paradol (27113-22-0) Smamnuucista
Product Name Root 6-Paradol
Magaca Kiimikada Root 6-Paradol; Paradol; 1- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl) decan-3-mid;
Fasalka Daroogada Daroogadaan waxaa laga yaabaa in lagu diyaariyo DMSO
Molecular Wsideed 278.392 g / mol
barafku Psaliid 31 - 32 ° C
Color Budada adag ee adag
Root 6-Paradol Application Cuntada lagu daro -> Wakiilada Dhadhan
Ku dhiirigelinta dheef-shiid kiimikaad
Saameynta miisaanka luminta.
Macmacaanka Root 6-Paradol (27113-22-0) Sharaxaad
6-Paradol budada (27113-22-0) Habka Wax-qabadka
Maamulka Paradol (6-paradol) (10 mg / kg) ayaa si cad u yareynaya tirada unugyada Iba1-positive-positive 1 iyo 3 ka dib tartamidda. Intaa waxaa dheer, Paradol si ba'an u yareeyaa tirada unugyada Iba1 ee ku yaala gobollada periischemic xitaa ka dib markii 3 maalmood ka dib tartamidda M / R. Paradol (6-paradol) wuxuu muujiyaa saameynta ugu xoogan ee ka dhalan karta xeryaha dhowr xabbadood ee lipopolysaccharide-microglia oo laga soo qaatay maskaxda miisaanka, oo ay ku jiraan 2-, 2-, 4-, 6-, iyo 8-paradol. Intaa waxaa sii dheer, Paradol wuxuu muujinayaa pungency xooggan ee dhammaan isku dhafka la yaqaan ee paradol. Paradol waxay sidoo kale muujineysaa waqtiga ugu sareeya ee xiriirka goobta goobta antiobesity ee ku saleysan natiijooyinka muujiyay in la nuugo metaboolada daraasaddan.
Paradol ( -paradol) wuxuu ku dhejiyaa apoptosis in xariiqa unugyada xuubka ah ee kiniiniga kansarka, KB, hab ku salaysan qiyaasta. Paradol wuxuu kudhicaa apoptosis iyada oo loo marayo hab-raaca-3-ku-tiirsanaan.
Faa'iidooyinka ee 6-Paradol budada (27113-22-0)
▪ 6-Paradol iyo antipyretic, oo loo qoray madax xanuun, xanuun (murqo xanuun, dhabar xanuun) iyo qandho mid kali ah ama lagu daro daawooyin kale.
6-Paradol waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawooyinka kale ee xanuunka si loogu daaweeyo xanuunka dhabarka oo hooseeya, lafo xanuun, qabow, iyo ilko xanuun
talinayo 6-Paradol budada (27113-22-0) qiyaasta
Qiyaasta afka ee dadka waaweyn waa 325 650 mg kasta 4 saacadaha 6. Qiyaasta ugu sareysa ee maalinlaha ah waa gram 4.
Ilmaha - qiyaasta lagu taliyey waa 10 ilaa 15 mg / kg 4 kasta saacadaha 6.
Waxay u egtahay kiniin iyo dareeraha si ay u qaataan afka, iyada oo aan cunto ama lahayn.
Dhibaatooyinka ay keento ee 6-Paradol budada (27113-22-0)
6-Paradol waa non-opiate, Paradol iyo antipyretic, loo qoro madax xanuun, xanuun (murqo xanuun, dhabarka) iyo qandho. Dhinaca kale, waxaa laga yaabaa inuu leeyahay waxyeelo soo raaca sida hoos ku qoran:
Xaylaha midabka midabka leh
Finan maqaarka ah iyo kelyaha daciifinta
Dhaawac beerka ah
Sidee 6-Paradol u Qabataa Sidii Loogu Buuxin Lahaa Fatwo Joogta Caafimaadka?